Miverena mifehy ny habetsaky ny Lollipop miaraka amin'ny SoundHUD | Androidsis
Miverena amin'ny fifehezana ny volan'ny Lollipop miaraka amin'ny SoundHUD
Cristina Torres sary placeholder | | Fampiharana Android, Android Version
Azo antoka fa maro aminareo izay manavao ny terminal-nao mankany Lollipop no nahatsikaritra fa ny fifehezana ny feo nampidirin'ny fanavaozana ny Android dia tsy tsara araka ny tokony ho izy. Na ny marimarina kokoa, ny ankamaroan'ny fanaingoana izay tokony hiorenan'ny mpampiasa dia tavela. Efa niresaka momba io lohahevitra io tao amin'ny bilaoginay izahay, ary tsy ny hamerina ny tenantsika na ny hanohy hanorotoro an'i Google amin'ity raharaha ity, fa ny fametrahana vahaolana amin'izany. Na dia efa misy tetika vitsivitsy azonao araraotina aza ary notantarainay teto, anio dia hasehoko anao zavatra izay tsy mila manana fahalalana bebe kokoa noho ny mametraka fampiharana ianao. Ny vahaolana amin'ireo olan'ny fitantanana rehetra ireo dia antsoina SoundHUD.
SoundHUD dia iray amin'ireo rindranasa izay tsy ho voamariky, na ho fampidinana azo alaina ho an'ny mpanatrika vitsy an'isa raha tsy noho ny zava-misy izay tsy naharesy lahatra ny Lollipop amin'ny resaka fitantanana ny feo sy ny fahanginan'ny terminal. Ka, inona no mety ho fanamboarana fanampiny tsy dia mahaliana loatra, nanjary zavatra tsara indrindra azo nampiana an-telefaona hamahana zavatra tsy nety nataon'i Google.
Raha toa ka toa marina loatra izany rehetra izany dia ampiako ilay izy SoundHUD Maimaimpoana tanteraka izany, ary na misy aza ny fividianana rindrambaiko hahatratra ny fanaingoana bebe kokoa, raha miahiahy momba ny famahana ny olana ianao dia afaka manao izany fa tsy mandeha amin'ilay boaty. Mazava ho azy, ho anao izay te hahalala ny momba azy rehetra, ity misy fizarana iray hanazavana azy amin'ny antsipiriany, mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'izany raha toa ianao ka te-hisintona.
Vantany vao mametraka ianao SoundHUD Ao amin'ny Android anao, ny zavatra ho hitanao dia tsy mila root, soloina ny tontonana fanaraha-maso ny terminal anao, ary raha misy mpampiasa Lollipop dia miseho ny maody mangina tena izy. Ny fampiharana dia mamela anao fanamboarana marobe an'ity tontonana ity, izay mety manana endrika maro. Ohatra, azonao atao ny misafidy eo amin'ny tontonana manitatra, ny tsipika manify na ny bara fanefana. Inona no endrika tianao indrindra?
Etsy ankilany, ny rindranasa dia manome fidirana haingana amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ireo bokotra volume, izay manamora kokoa ny fikirakirana azy ary ambonin'izany rehetra izany dia azonao idirana amin'ny fotoana rehetra. Ary koa, raha manana takelaka ianao dia afaka mitantana ny volan'ny mozika eto, fa tsy miady aminy foana. volavolan-telefaona izay amin'ity tranga manokana ity, ho an'ny fitaovana resahina, tsy dia misy dikany izany.
Raha fintinina, ity free application mamela anao hanao zavatra telo indray mandeha. Amin'ny lafiny iray, manana takelaka fanamafisam-peo ho an'ny fitaovanao araka izay tianao. Etsy ankilany, hamahana ireo olana nipoitra niaraka tamin'i Lollipop ary niteraka tsikera marobe noho ny lozisialy ao amin'ny tontolon'ny Android. Ary fahatelo, hitrandraka fiasa fanampiny amin'ny tranga takelaka, na fidio haingana ireo fiasa rehetra avy amin'ny lakilen'ny boky. Heveriko fa miaraka amin'ny zavatra maro be amin'ny vidin'ny zero euro, dia iray amin'ireo fampiharana tsy maintsy andramanao ireo, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Miverena amin'ny fifehezana ny volan'ny Lollipop miaraka amin'ny SoundHUD
Zahao tsara ireo rindranasa aroson'izy ireo, tsy maimaim-poana ny fampiharana, manome anao andrana 15 andro izy io.